Ukudlwengula Archives - Isambane News
Ugwetshwe udilikajele owesilisa waseKZN owadlwengula ingane eneminyaka engu-11
Ugwetshwe udilikajele owesilisa waKwaZulu-Natal owadlwengula ingane eneminyaka engu-11. Ingane eneminyaka engu-11 ubudala yabukiswa i-video yezithombe zocansi yase idlwengulwa ngumalume wayo…
Kuboshwe owesilisa osolwa ngokunukubeza ngokocansi ingane yakwamakhelwane eneminyaka engu-14
Kuboshweowesilisa osolwa ngokunukubeza ingane yakwamakhelwane ngesikhathi isendleleni eya esikoleni izolo ekuseni endaweni yaseDokodweni ngaseMandeni enyakatho yeKwaZulu-Natal. Kuthiwa intombazane eneminyaka engu-14…
Kuboshwe umnikazi wesitolo ngecala lokudlwengula intombazane eneminyaka engu-10 ubudala eyayiyothenga i-airtime
Intombazane eneminyaka engu-10 ubudala ithunywe ukuthi iyothenga i-airtime esitolo sendawo. Umnikazi wesitolo oneminyaka engu-36 ubudala eNamakgale ngaphandle kwasePhalaborwa uboshiwe ngezinsolo…
Ugwetshwe kanzima owesilisa owadlwengula abesifazane abane wabulala umfowabo
Inkantolo eNkulu yaseMpumalanga ehleli eGraskop ngoLwesine igwebe indoda eneminyaka engu-32 ubudala iminyaka engu-73 ngecala lokubulala, amacala amane okudlwengula, ukugebenga esebenzisa…
Izindaba zomhlaba Okufakiwe
Uthisha udlwengule abafundi abangu-13 wakhulelisa abangu-8 kubo
Uthisha wesilisa e-Indonesia uthuse umhlaba wonke ngezenzo ezimbi azenze ezinganeni okufanele azibumbe ukuze zibe nekusasa elingcono anganukubezi. UHerry Wirawan uthisha…
Owesifazane waseKZN udlwengulwe owesilisa owamthembisa ukuthi uzomtholela umsebenzi
Owesifazane oneminyaka engu-28 udlwengulwe owesilisa emthembise ukuthi uzomtholela umsebenzi namhlanje ekuseni. Isakhamuzi saseGannet Crescent eDawncrest – KZN sithinte iReaction Unit…
Izindaba ezihamba phambili Izindaba zase-Afrika Okufakiwe
Kuboshwe owesilisa ngecala lokudlwengula idada,inkukhu nenja kamakhelwane.
Amaphoyisa aseBotswana abophe indoda eneminyaka engu-33 ubudala okusolwa ukuthi ibanjwe ocansini nedada,inkukhu nenja kamakhelwane wayo. Ngesikhathi kulandelwa imininingwane,uLebalang Maniki ongumkhuzi…
Owesifazane waseZimbabwe udlwengulwe eVerulam, eKZN
Owesifazane oneminyaka engu-24 ubudala waseZimbabwe udlwengulwe ngowesilisa obemgaqele ngesikhathi eshiya umakhalekhukhwini esitolo esiku-Wick Street, eVerulam ngoMgqibelo ntambama. Lo wesifazane wagibela…
Indumiso Izindaba Okufakiwe
Kudlwengulwe abesifazane besonto, kwebiwa izinsimbi zomculo nemoto yomfundisi eMpumalanga
Kumanje kuthungathwa abasolwa abathathu abasolwa ngokudlwengula abazalwane ababili base begebenga isonto,beba izinsimbi zomculo ngaphambi kokuba babaleke nemoto yomfundisi. Ukuhlasela kwenzeke…
Owesilisa oneminyaka engu-36 ubudala ugwetshwe odilikajele abangu-6 ngokudlwengula indodakazi yakhe ayizalayo
Umsolwa oneminyaka engu-36 ubudala waseClocolan ugwetshwe eNkantolo eNkulu yaseFree State eLadybrand ngemuva kokutholwa enecala lokudlwengula indodakazi yakhe eneminyaka engu-14 ubudala…